5 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အကောင်းဆုံး Forex ရောင်းဝယ်ရေးအက်ပ် 2022 ခု - ကုန်သွယ်မှုအက်ပ်သုံးသပ်ချက်2ခုကို လေ့လာပါ။
သင့်အကောင့်တွင် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေဖြင့်၊ ယခု သင့်အတွက် ကျန်သည်မှာ ငွေကြေးအတွဲများကို စတင်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အရောင်းအ၀ယ်အက်ပ်များသည် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုထက်ပို၍ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသောကြောင့်၊ ရှာဖွေမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ တိကျသော Forex ကုန်သွယ်မှုများအတွက်၊ သင်ကဲ့သို့သော ငွေကြေးအတွဲများကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ USD / EUR၊ နှင့် သင့်အား သက်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု စာမျက်နှာသို့ ပြန်ညွှန်းပါမည်။
မည်သည့်ကုန်သည်အတွက်မဆို ကုန်သွယ်မှုဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ပထမဆုံးမက်ထရစ်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်သည်။ ဤအရာ၏ ရှေ့ဆုံးတွင် ပွဲစားက ကွပ်ကဲသော လိုင်စင်အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူကေရှိ ပလပ်ဖောင်းများကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ FCA. ဩစတေးလျမှာ ရှိတယ်။ ASIC, CySEC ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ဂျာမနီရှိ BaFin စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် ၎င်းကို အကြွေးဝယ်ကတ်များ သို့မဟုတ် ဘဏ်အကောင့်အပ်ငွေများထက် ပိုနှစ်သက်သည် - အက်ပ်ထဲသို့ အရေးကြီးသောဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်နိုင်သောအားဖြင့်၊ အချို့သောကုန်သွယ်ဆိုဒ်များသည် e-wallet ကဲ့သို့သော ပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။ PayPal က or Neteller. အပလီကေးရှင်းသည် ငွေသွင်းခြင်းအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း ရှိ၊ မရှိကိုလည်း စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
MetaTrader4 သည် ကုန်သည်များ၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ကုန်သည်များအတွက် သေတ္တာထဲတွင် အပြတ်သားဆုံး ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငွေရေးကြေးရေးတူရိယာအားလုံးတွင် ကုန်သွယ်မှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် Forex နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ MT4 သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဦးစားပေးမှုများကို လွယ်ကူစွာ အသုံးချနိုင်သောကြောင့် အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အသုံးပြုသူများကို algorithms နှင့် autonomous robots များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှုကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် MT4 တွင် သင်သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ဘောင်များအလိုက် ဆော့ဖ်ဝဲသည် ရာထူးများကို အလိုအလျောက်ဖွင့်ပိတ်ပိတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Exchange-Traded Funds များသည် စတော့များနှင့် ဆင်တူသော်လည်း များသောအားဖြင့် မတူကွဲပြားသော ပိုင်ဆိုင်မှုအစုအဝေးတွင် ရောင်းဝယ်ကြသည်။ ၏တန်ဖိုး ETFs ၎င်းကို ခြေရာခံနေသည့် အရင်းခံပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်၍ နေ့စဥ် အပြောင်းအလဲများ။ ထို့ကြောင့်၊ ကုန်သွယ်မှုနေ့တလျှောက်လုံး တိုတို သို့မဟုတ် ရှည်ရန် အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အရောင်းအ၀ယ်အက်ပ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများ မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နိုင်သောကြောင့် မှတ်သားဖွယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်စည် စွမ်းအင်၊ သတ္တုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ဟူ၍ ကဏ္ဍသုံးမျိုး ခွဲခြားထားသည်။ ဤအရာများ၏စျေးနှုန်းများသည်တစ်နေ့တာလုံးသိသိသာသာကွဲပြားလိမ့်မည်။ အရောင်းအ၀ယ်အက်ပ်အများစုသည် သင့်အား ကုန်ပစ္စည်းတူရိယာဒါဇင်များစွာကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ဒီအထဲမှာ ပါနိုင်တယ်။ ရှေ, ဆီ, ဓါတျငှေ့နှင့် ဂြုံ.
အရောင်းအ၀ယ်ဆိုက်တိုင်းသည် ဤဒိုမိန်းသို့ စွန့်စားခြင်းမရှိသေးပါ။ မိရိုးဖလာ ပွဲစားတွေကို အားကိုးတတ်တယ်။ CFDs ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများပေါ်တွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန်။ အဲဒီလို လုပ်ချင်ရင် လုပ်မယ်။ cryptocurrency ကုန်သွယ်, သင်သည်သြဇာနှင့်တိုတောင်းရောင်းအားအဆောက်အ ဦ မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်။